ဇ = ဇိမ် ရှိရှိ ..မနေရတဲ့ လုတွေ…အကြောင်း..( တိုင်းပြည်အကြောင်း နည်းနည်းပြောပါရစေ..) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ဇ = ဇိမ် ရှိရှိ ..မနေရတဲ့ လုတွေ…အကြောင်း..( တိုင်းပြည်အကြောင်း နည်းနည်းပြောပါရစေ..)
ဇ = ဇိမ် ရှိရှိ ..မနေရတဲ့ လုတွေ…အကြောင်း..( တိုင်းပြည်အကြောင်း နည်းနည်းပြောပါရစေ..)
Posted by alinsett on Sep 1, 2012 in Arts & Humanities, Creative Writing, Critic, Myanmar Gazette | 25 comments
ဖွံ့ ဖြိုးဆဲ..နိုင်ငံ တစ်ခုမှာ ကျွန်တော်..နေထိုင် အသက်ရှင်နေရပါတယ်။
စကားလုံးလှလှလေး သုံးပြီး.. ဖွံ့ဖြိုးဆဲ..နိုင်ငံ …လို့ပြောရတာပါ ။ အမှန်တကယ်တော့ ဆင်းရဲ..တဲ့နိုင်ငံပါ ။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ… သယံဇာတ တွေ.. ပေါကြွယ်ဝ တဲ့ နိုင်ငံ တစ်ခု…လို့ငယ်စဉ်ကတည်းက စာတွေ ထဲမှာ..သင်ရပါတယ် ။
အမှန်တကယ်လည်း… သယံဇာတ တွေ. ပေါ ပါတယ် ။
သဘာဝတရားကလည်း….လှပ တည်ငြိမ်စွာ..ရပ်တည်..ပေးထားပါသေးတယ် ။
ရာသီဥတုလည်း..မျှတ သာယာတယ်..လို့ပြောရင် ရနိုင်ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့်…. ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု.တွေ လိုအပ်တဲ့ နိုင်ငံ တစ်ခု အနေနဲ့ ရပ်တည်နေရဆဲ..ပါ။
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ..ဘာကြောင့် ဆင်းရဲ…နေတာလဲ…
အဲဒီ အဖြေကို ….. ပညာရှင် တစ်ယောက် မဟုတ်တဲ့ ကျွန်တော်…မသိနိုင်ပါဘူး။
ကိုယ် လိုက်လို့ မမီတဲ့မေးခွန်းတွေ… နဲ့အိုးနင်းခွက်နင်း ဖြစ်နေတုန်းမှာ……
လွန်ခဲ့တဲ့ … တစ်လလောက်က….
စာပေ ဟောပြောပွဲ တစ်ခု ကို နားထောင်လိုက်ရပါတယ် ။
ပြောသူကတော့… အားလုံးသိကြတဲ့ ..စာရေးဆရာမ ဂျူး ပါ ပဲ ။
ဆရာမ ဂျူးက.. သူဖတ်ခဲ့ရတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ် ထဲက အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို..ပြန်ပြောပြပါတယ် ။
( ဘယ်စာအုပ်လဲ.. / ဘယ် ဟောပြောပွဲ..လည်း.ဆိုတာတွေတော့ အကျယ် ပြောမနေတော့ပါဘူး ။ ဒီဟောပြောပွဲက အကြောင်းအရာကိုလည်း..အားလုံးလိုလို
ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံတွေ….. ဘာကြောင့် ဆင်းရဲနေတာလဲ…. ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာ…ပါ ။
ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံတွေဟာ.. အချက် ( ၄ ) ချက်ကြောင့် ဆင်းရဲ..နေရတာပါ..တဲ့ ။
အဲဒီ အချက် ( ၄ ) ချက်ကတော့…..
( ၁ ) မကောင်းတဲ့ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေနဲ့ထိတွေ့ ဆက်ဆံနေရတဲ့ အခါ……
( ၂ ) သဘာဝ သယံဇာတတွေ..ပေါကြွယ်ဝပြီး..အဲဒီ ပေါကြွယ်ဝမှုကို တလွဲ.အသုံးချနေသူတွေ.ရှိနေတဲ့ အခါ….
( ၃ ) ပြည်တွင်းစစ်တွေ ဖြစ်နေတဲ့ အခါ……..
( ၄ ) ညံ့ဖျင်းတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နဲ့ရပ်တည်နေရတဲ့ အခါ….
အဲဒီ အချက် ( ၄ ) ချက်နဲ့ ကိုက်ညီနေရင်…..
အဲဒီ နိုင်ငံဟာ… ဆင်းရဲခြင်း ဆိုတဲ့ထောင်ချောက်ထဲ.. ကျ နေမှာပဲ…. တဲ့။
ကျွန်တော်တိ်ု့နိုင်ငံ…ဘာလို့ ….. မကြွယ်ဝသေးတာလဲ….
ကျွန်တော်တို့ …ဘာလို့ဇိမ်ရှိရှိ မနေနိုင် ကြသေးတာလဲ….
အဲဒိ အချက် ( ၄ )ချက်နဲ့ ..ကိုက်ညီနေလို့ လား….
( ၁ ) မကောင်းတဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေ.နဲ့ထိတွေ့ ဆက်ဆံနေရသလား…
( ၂ ) သယံဇာတတွေ.ပေါကြွယ်ဝနေသလား…
( ၃ ) ပြည်တွင်းစစ်တွေ..ဖြစ်နေသလား….
( ၄ ) ညံ့ဖျင်းတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်… နဲ့ ရပ်တည်နေရသလား….
( ကျွန်တော် မသိပါဘူး ။ ဒီ အချက်တွေနဲ့ချိန်ထိုး ပြီး… သတ်မှတ်ချက် တစ်ခုခု ချဖို့ဆိုတာ….
ကျွန်တော်… ဥာဏ် မမီကောင်းပါဘူး )
တွေးနိုင်သူများ..ဆက်တွေးပေးကြပါ ။ ကျွန်တော်ကတော့…. မနေနိုင် မထိုင်နိုင်နဲ့ … တဆင့်ပြန်လည် ပြောပြရုံ သက်သက်ပါ ။
ဒီပို့်စ်လေးက အစ , ပျိုး..ပို့ စ်ပေါ့ ။ ကျွန်တော်က ကျောက်ခဲတစ်လုံးကို ကောက်ပြီး… ဝေးဝေးကို လှမ်းပစ်လိုက်တာပါ ။
ဘာ ဆက်ဖြစ်မလဲ…ဆိုတာတွေ ကိုတော့… ဘေးက ကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေများ…က ဆက်တွေးကြပေါ့နော့ …
တချို့ ကတော့…ဇိမ်ရှိရှိနေနိုင်ကြသားပဲ..နော် ။
( အဲဒီ တချို့ ဆိုတာက… ဘာ…တော ..ဆိုလား… / အဲဒီထဲမှာ… တော့… လူချောတွေပေါ့….ဗျာ. ။အဟဲ..)
ဘာပဲပြောပြော…. ဆင်းရဲသား..လူတန်းစား များတဲ့နိုင်ငံလို့ ပြောရင် မငြင်းနိုင်ဘူး ထင်ပါတယ် ။
ဇိမ်ရှိရှိ ..မနေနိုင် သူတွေလည်း. ခပ်များများ..ရှိနေပါတယ် ။
တောနေ လူထု နဲ့ မြို့ ပြနေ လုထု… ဇိမ်မရှိပုံ..တော့ ကွာတာပေါ့လေ…။
ရွှံ့ ထဲ.. / နွံ ထဲမှာ..ကျွဲနဲ့ နွားနဲ့ အပြိုင် ရုန်းကုန်နေရတယ်….
ဒါပေမယ့် သူတို့ ဘ၀ ဟာ..ဇိမ်..ရှိမလာပါဘူး ။
အနေ ဇိမ်မရှိ ../ အစားဇိမ်မရှိ….
လုပ်ရတာနဲ့ တန်တဲ့ အကျိုးရလဒ်..မခံစားရလို့ …ဇိမ်..မရှိ ။
မြိ်ု့ ပြနေ လူထုကျတော့လည်း………….
ဘတ်စ်ကား ကျပ်ကျပ်ကို တိုးဝှေ့ စီးနေရလို့ဇိမ်မရှိ…
ကိုယ့် လုပ်အား / ဥာဏ်အားကို… ရနိုင်သလောက်…ဖျစ်ညှစ်ပြီး..ပို.. . ယူချင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်( တချို့) ဆီမှာ အလုပ် လုပ်ရလို့ …ဇိမ်မရှိ
ထမင်းစားပြီး.10 မိနစ်တောင် နားမနေရတဲ့အလုပ် တွေမှာ.လုပ်နေရလို့ဇိမ်မရှိ…
အလုပ် ချိန်ကို ပိုလို့ ရသမျှ ပို…ခိုင်းချင်သူတွေကြောင့် ရတဲ့ လုပ်အားခ နဲ့ မတန်တဲ့ 
လုပ်အားတွေ..ပေးနေရလို့ … ဇိမ်..မရှိ..
အလုပ်သမားအခွင့်အရေးတွေ… ဆုံးရှုံးနေရတဲ့ …လုပ်ငန်းခွင်တွေထဲမှာ… တချို့ က.. မသိနားမလည်လို့ .. လုပ်မြဲ..ဆက်လုပ်ကြ /
တချို့ ကတော့… သိလျက်နဲ့ ….. ရုန်းမထွက်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့်… လုပ်မြဲ.ဆက်လုပ်…
ဒါကြောင့် ….. ဇိမ်..မရှိ ။
အလုပ်က အိမ် ပြန်တော့လည်း…………
ထိုင်စရာ…. နေရာမရတဲ့မိုးမလုံ/ လေမလုံ…လိုင်းကား ကျပ်ကျပ်ပေါ်မှာ…..
တိုးဝှေ့ ပြီး..စီးရမယ်…./ ဇိမ်..မရှိ…
ချွေးနံ့ တထောင်းထောင်း… ထ , နေတဲ့အိမ်အပြန် / မေပန်းပြီးရင်းးးးထပ် မောရင်း….ဇိမ်မရှိ….။
အိမ်ရောက်ဖို့ ကို… လိုင်းကားပေါ်က ဆင်းရုံနဲ့ မရောက်ပဲ….
လမ်းကြို လမ်းကြားတွေထဲ..မိနစ် 30လောက် လျှောက်ပြီး… ၀င်ဦး…၊
အိမ်ရောက်တော့…တစ်နေ့ တာ မောပန်းလာသမျှ….
ဖြေဖျောက်လို့ ရလို့ ရငြား…. T V ကြည့်မယ်… ပြင်တော့…မီးကပျက်……။
ဇိမ် မရှိလိုက်တဲ့ ဘ၀တွေ… ပါ ။
ဒီထက် ဇိမ်မရှိတဲ့ ဘ၀တွေ.. ရှိနေသေးတယ်..နော် ။
မယုံ မရှိနဲ့။
ဇိမ် ..ရှိချင်တယ် လို့ပြောနေတော့………….
ဘာ အလုပ်အကိုင်မှ မလုပ်ပဲ… ထိုင်နေဖို့ ကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး ။
ကိုယ် လုပ်တဲ့လုပ်အားနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့အကျိုးရလဒ်တွေ…. ရ လာမှ ဇိမ်ရှိမယ် ။
အလုပ် အကိုင် အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ..ရ လာမှ ဇိမ်ရှိမယ် ။
၀င်ငွေနဲ့ထွက်ငွေ..မျှတ မှု.ရှိလာမှ… ဇိမ် ရှိမယ် ။
မိုးမလုံ / လေမလုံ တဲစုတ်ကလေးတွေ…ထဲမှာနေ..ပြီး… ထမင်း နပ် မမှန်လို့ပိန် ချောင် / မွဲတေနေ တဲ့မိသားစုတွေ.. မရှိမှ… ဇိမ်ရှိတယ်….
ပညာ မသင်ရပဲ.. လမ်းဘေးေ၇ာက်နေတဲ့ကလေးငယ်တွေ ရဲ့ အနုာဂတ်တွေ.လှ ပ လာမှ ဇိမ် ..ရှိမယ် ။
မသေသင့်တဲ့ ရောဂါလေးတွေ..နဲ့သေနေတာတွေ… မရှိတော့အောင် လုပ်နိုင်မှ ..ဇိမ်ရှိတယ်…
လူတန်းစေ့နေနိုင် သူတွေ..များလာမှ ဇိမ်ရှိမယ်..။
အရင်က ဒီ နိုင်ငံ ထက်… ချို့ တဲ့ ….တဲ့ နိုင်ငံတွေက အခု…ဒီနိုင်ငံ ထက် သာပြီး.. တိုးတက်မှု နှုန်းတွေ မြင့်တက်သွားတာကို…
အမီ လိုက်နိုင်မှ… ဇိမ် ရှိမယ်..။
စည်းကမ်း ရှိ်မှ ..ဇိမ် ..ရှိမယ်…
အရေးကြီးဆုံးကတော့…စည်းကမ်းရှိဖို့ ပါ ။
အိမ်တစ်အိမ်../ မိသားစုတစ်စုပဲဖြစ်ဖြစ်…( ဒါမှမဟုတ်..) မျြို့နယ်…/ မြို့/ ပြည်နယ် / တိုင်း / နိုင်ငံ….
(နေရာဒေသ တစ်ခုခုပေါ့ဗျာ…) အဲင်္ဒီနေရာ တစ်ခုခုမှာ….
အုပ်ချုပ်ခံ… ဆိုပြီး.နှစ်မျိုှးိရှိပါတယ် ။
အုပ်ချုပ်သူ ဘက်လည်း…. သူ…အုပ်ချုပ် ပိုင်ခွင့် ရတဲ့ … အတိုင်းအတာထဲကနေ
စည်းကမ်း ရှိရှိ အုပ်ချုပ်ရင်…………….
စည်းကမ်းရှိရှိ / သမာသမတ်ကျကျ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ …. စနစ် / လမ်းကြောင်း ထဲမှာ..
ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု..ဆိုတာ ( ဇိမ် ရှိဖို့ ဆိုတာ ) သိပ် မဝေးနိုင်ပါဘူး။
စည်း ကမ်း သည် လူ ၏ တန်ဖိုး..ဆိုတဲ့ စကားလေး..ရှိပါတယ် ။
စည်းကမ်းသည် လူ ၏ တန်ဖိုးလည်း.. ဖြစ် သလို………… အဖွဲ့ အစည်း တစ်ခု ၏ တန်ဖိုး ..လည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
အဲဒီထက် တစ်ဆင့်တက်ပြောရရင်….
စည်းကမ်းသည်…နိုင်ငံ တစ်ခု ရဲ့တန်ဖိုးလည်း.. ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ..ဒီ ထက် တစ်ဆင့် ထပ်ပြောရဦးမယ်..ဆိုရင်….
စည်းကမ်းသည်.. ကမ္ဘာ တစ်ခု ၏ တန်ဖိုး..ပေါ့ဗျာ..။
စည်းကမ်းရှိတဲ့ကမ္ဘာ တစ်ခု ဖြစ်နေလေ.. တန်ဖိုးကြီးတဲ့ ကမ္ဘာမြေ တစ်ခု ဖြစ်လာလေလေ..ပေါ့ဗျာ..။
အပေါ်မှာ ..ပြောခဲ့တဲ့အချက် ( ၄ )ချက်ထဲက…
နံပါတ် ( ၂ ) အချက်က… တကယ်တော့… ကောင်း ရမယ့် အချက်ပါ ။
သယံဇာတတွေ..ပေါ့ကြွယ်ဝတာ… ဘာလို့ မကောင်းရမှာလဲ….
အဲဒီ သယံဇာတတွေကို…. တလွဲ..အသုံးမချမိဖို့လိုပါတယ်…။
ကျန်တဲ့အချက်… ( ၁ ) ၊ ၊ ( ၃ ) ၊ ( ၄ ) တွေကတော့……………
မဖြစ်ရင် ကောင်းမယ်.. ။
ရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ ……….. မလွယ်ကူလှပါဘူး။
မြန်မြန်လေး…….. ထောင်ချောက်ထဲက လွတ်အောင် လုပ်ကြပေါ့ဗျာ..။
တာဝန်သိ သူ… / တာဝန်ရှိသူ..တိုင်း../ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိသူတိုင်း… ကူညီ ကယ်တင်ပေးမှ ဖြစ်မှာပါ ။
မပြောကောင်းမဆိုကောင်း… ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံဟာ.. အဲဒီ ထောင်ချောက်တွေထဲ..ကျနေတာလား…။
ထောင်ချောက်ကြီးထဲက မြန်မြန် လွတ်ကင်းနိုင်ပါစေ….. / မြန်မြန် ဇိမ်ရှိရှိ နေနိုင် ကြပါစေ..လို့…. ဆန္ဒပြုရုံ.လေး………
တွေးမိတာလေးကို… ကောင်းစေလိုတဲ့စိတ် သက်သက်နဲ့ချရေးမိတာပါ ။
( ဒီနေရာ မှာ..ကျွန်တော့် အတွေးနဲ့အခြားသူ ရဲ့အတွေး မတူနိုင်ပါဘူး။ ကွဲပြားနိုင်ပါတယ် ။
ကျွန်တော်က ကျွန်တော့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မြင်တွေ့ နေရတာတွေကို ကျွန်တော့်အမြင်ကို ချရေးတာပါ ။
ကျွန်တော့်လို ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးမှာ..မ၇ှိတဲ့/ ပြည့်စုံကြွယ်ဝနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထဲက လူတစ်ယောက် အနေနဲ့ ဆိုရင်…
အမြင် အတွေး..ဘယ်လိုမှ မတူနိုင်ပါဘူး ။
ဥပမာ…. အလင်းဆက် နေထိုင်ရှင်သန်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ 
သမ္မတ ကြီးတစ်ယောက် နေထိုင် ရှင်သန်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ…
မတူနိုင်ပါဘူး ။ သမ္မတ ကြီးတစ်ယောက် အနေနဲ့………….
ကျွန်တော့် ထက်..ပို ပြီး..ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့်တွေးပေးနိုင်ရင်လည်း တွေးနိုင်မယ်..။
မျက်ကွယ်ပြု..နေရင်လည်း.နေမယ်ပေါ့။ ဒါက စကားပမာ/ ဥပမာပါ ။
ကျင်လည်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး.အမြင် / အတွေးတွေ..ကွဲပြားနေနိုင်တာကိုပြောချင်တာပါ ။
စကားပမားလေးကို ကြုံလို့ ထည့်ပြောလိုက်တာပါ ။ မှန်လွန်းသွားတာ… မှားလွန်းသွားတာရှိနရင်..ကျွန်တော့် မသိနားမလည်မှု ကို.ခွင့်လွတ်နားလည် ပေးကြပါ ။
ဒီ့ ထက် လည်း..ပို မပြောလိုတော့ပါဘူး ။
ကိုယ့်ပေါင် ကိုယ်လှန်ထောင်းတဲ့ ပိုစ့် ဖြစ်သွားမှာ စိုးလို့ ပါ ။
ကိုယ့် ပေါင် ကိုယ်…လှန်..ထောင်းရပြီ..ဆိုကတည်းက…မကောင်းပါဘူး။
ပေါင်ကို လှန်..လိုက်ရလို့ ..ရှက်ကိုးရှက်ကန်းလည်း…ဖြစ်ရဦးမယ် ။
ထောင်းလိုက် ရလို့ ….နာ လည်း..နာ…ရဦးမယ်….
ကိုယ့် ပေါင် ကိုယ် လှန်ထောင်းနေရတဲ့ ……
တစ်ခါတစ်လေကြ ၊ စီးပွားလုပ်ငန်းအဆင်မပြေ ဆုံးရှုံးတဲ့အချိန်မျိုးကြရင် အရမ်းစိတ်ပျက်မိတယ်
ဒါပေမယ့်… ကိုယ့်ထက်ဘဝဆိုးတဲ့လူတွေ မြင်ရပြန်တော့ ၊ ငါ သူရို့ လောက် မဆိုးသေးပါလားဆိုပြီး ဖြေသိမ့်မိသလို
ကိုယ့်ထက် အများကြီးမြင့်တဲ့ ဘဝတွေကို ကြည့် ၊ စိတ်ကူးယဉ်ပြီး…တစ်နေ့ ငါလဲ သူရို့ လို ဖြစ်ရမယ် ဆိုပြီး အားပြန်တင်းရတယ်ကွာ
ကိုအလင်းဆက် ရေ ! အတွေး ကောင်း အရေးကောင်းသူ တစ်ယောက်လို့ ထပ်ပြီး ပြောပရစေဗျာ ! ” အ ” အထိ ဆက်လက်ဖတ်ရှု အားပေးသွားမှာမို့ ဇိမ် ရှိရှိလေး တွေးပြီး ဇိမ်ရှိရှိ လေး ရေးသွားနိုင်ပါစေဗျာ !
အဖေ..အမေ အပါအဝင် မိ့သားစု့..၉..ယောက်.. ရှိ့တယ်..ဆိုပါဆို့….အဖေဖြစ်သူက…၁.. လကို…သူ့ဝင်ငွေ..၂..သိန်း..ရှိ့မယ်….မိန်းမဖြစ်သူကို..၁..လ..၁..သိန်းပဲပေးတယ်..(ကျန်တဲ့..၁.သ်ိန်းက.. .သူ့အတွက်..စမောလ်..ကိစ္စ..မာဆတ်ဘာညာ..ဘာညာ..အတွက်..ချန်တယ်.ဆိုပါတော့)…. မိန်းမဖြစ်သူကလည်း..သူပေးတဲ့..၁..သိန်း..ထဲက..( ပါတိတ်ဖိုး..လူမှု့ရေး.. သာရေး..နာရေး…. သားသမီးေ၇း.. ဘာရေး.ညာရေး..စသဖြင့်..).အကြောင်းပြပြီး.(ယောကျာင်္း..ကိုအားကျမခံ)…..၁..သိန်း..ထဲက…၈..သောင်း..ဗုန်း….အဟို့……. … ကျန်တဲ့သားသမီး…(၇)…..ယောက်…… .အဘယ်ကဲ့သို့သော်..စည်းစိမ်ကို… .အမောင်အလင်းစက်. .ပြောသလို..အဘယ်သို့ခံစားရပါအံ့နည်း…. အဖြေဟာ..ကိုယ်စားများတဲ့.. တိုင်းပြည်ဟာ…ပျက်၏..ပေါ့…. သူငယ်ချင်း.. ..ကျနော်အပါအဝင်..ပညာတတ်တွေ..သူများနှိုင်ငံမှာ.. ကျွန်ခံနေရတယ်လေ… .ဂနာဟိ့..မှတ်လော့….သူငယ်ချင်း…
ကျနော်ကတော့ “ဇိမ်” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မကြိုက်မိတာတော့ အမှန်ပဲ ..
ဇိမ် ဆိုတာကို ကျနော်ကတော့ မကောင်းတဲ့ အပြုအမှု အကျင့် တွေနဲ့ တွဲဖက်မြင်မိသဗျ …
ဇိမ် အစား အေးအေးဆေးဆေး .. အေးအေးလူလူ .. စတဲ့ စကားလုံးတွေကို ပိုကြိုက်မိသဗျာ …
ဒါကြောင့် ကျနော်ကတော့ဖြင့် “ဇိမ်” ရှိရှိ မနေချင်ဘူး ..
“အေးအေးလူလူ” ပဲ နေချင်တော့တယ်ဗျာ ..
ကိုကြီ..ပေ..ရေ ။ အတွေးလေး.တူပါ့ဗျာ.။
ကျွန်တော့်မလဲ..အဲသလိုလေးပဲ.ဖြေတွေးနေရပေါ့ ။ :D
ဇီးယိုကိုဇွန်းနဲ့ ဇိမ်ခံပြီး စားနေလိုက်အုံးမယ့်ကိုခင်ခရေ့…
ကဲ..ဈ မှသည်…အ ..အထိ ဆက်လက် ခံစားပေးပါဦးနော့
အတွေး ကောင်း အရေးကောင်းသူ တစ်ယောက်လို့ ထပ်ပြီး ပြောပြန်တဲ့ YE YINT HLAING
ရေ… ကျေးဇူးပါ ။” အ ” အထိ ဆက်လက်ဖတ်ရှု အားပေးသွားမှာမို့ ဇိမ် ရှိရှိလေး တွေးပြီး ဇိမ်ရှိရှိ လေး
ရေးနိုင်အောင်… ဆုတောင်းပေးလို့ ကျေဇူးပါ..လို့။
Nay Mara ရေ..ကျေးဇူး…။:D
ဇိမ်ရှိရှ်ိနေနိုင်သူတွေ..ရှိတယ် ။ ဘယ်သူတွေလဲ..ဆိုတာလည်း..အားလု့းလိုလို သိကြတယ် ။
အစ ဖော်ပေးတဲ့ အတွေးလေး..အတွက် ကျေးဇူး..ပါ ။
ရေ.. အားပေး ဖတ်ရျု..ဝေဖန် ခံစာေးပးလို့ကျေးကျေးပါ…
ကျွန်တော်လည်း… ဇ ကွဲ.လေးမှာ ဘာခေါင်းစဉ် နဲ့ ရေးရမှန်း မသိ ။ စဉ်းစားရ ခက်နေတာလေ.။
အဲဒါနဲ့ ပဲ..ဇိမ် ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးပဲ…. ပြေးမြင်ပြီး..
ခံစားရေးဖွဲ့ လိုက်တာ ..။ အဟီး ကျွန်တော်ကလူရော… စကားလုံးရော…ချို့ တဲ့ တယ် ဗျ ။
စာချစ်သူများ.အားလုံးကို ခင်မင်လေးစားစွာ…ကျေးဇူးပါ…လို့ …
ခညားလားဂျ .. စကားလုံး ချို့တဲ့တယ်ဆိုတာ .. :D
လူဂ အနော့်ထက် စာရင် ပိုတောင် ဖွံ့ဖြိုးသေးတယ် ပြောရမှာ ..
စကားလုံး ကတော့ ပြောနေနဲ့ ..
အနော့်ထက် တောင်လိုယာလို ပုံအောင် သာဒယ်ဆိုတာ သိပီးသားဘာ .. :D
မှန်ပါတယ်ခင်ဗျား ကျွန်တော် :D တို့
အမိမြန်မာပျည် သဂျီးအခေါ် အဖ မြန်မာပြည် ကြီးဟာ သယံစာတတွေပေါကြွယ်လှဘာဒယ်
ကိုမိုက်ကယ်တို့ များ… ပျေးတာတောင် ဂိန်ညောင်ညောင် …တဲ့ ။
အင်း တစ်ချိန်တုန်းက တစ်နေရာမှာပေါ့ဗျာ…။ အထက်လူကြီးတွေက အောက်လက်ငယ်သားတွေကို ဘာပြောတယ်မှတ်လဲ…။ မင်းတို့က ခိုင်းသလောက်လေးလုပ်ပြီး ပါးဖောင်အောင်စားပြီး နားကားအောင်အိပ်လို့ရသေးတယ်တဲ့…။ ငါတို့က အဆင့်ဆင့်ပေးထားတဲ့တာဝန်တွေနဲ့ တဲ့….။ အဲဒိတော့လည်း ငနေ၀န်းနီတို့ ….။ ၀၀ စား ဝေးဝေးရှောင် ၀ီစီသံကြားရင် ၀ပ်နေလိုက်တာပေါ့ ဟ ဘယ်ရမလဲ….။
….( ၁ ) မကောင်းတဲ့ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေနဲ့ထိတွေ့ ဆက်ဆံနေရတဲ့ အခါ……
ကိုယ်ဆင်းရဲတာသူများကိုအပြစ်တင်လို့မရပါဘူး။ ဆင်းရဲတဲ့အိမ်တအိမ်က ဘေးနားက ချမ်းသာတဲ့အိမ်က ငွေမချေးလို့ မထောက်ပံ့လို့ဆိုပြီးအပြစ်မတင်သင့်ပါဘူး။ ကိုယ့်အပြစ်ကိုပဲကိုယ်ရှာသင့်ပါတယ်။ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးကျိုးစားသင့်ပါတယ်။
သယံဇာတပစ္စည်းတနှစ်တန်ဘိုးဘယ်လောက်ထွက်လဲ။ တယောက်ကို တစ်ကျပ်နှုံးနဲ့ လူဦးရေ သန်း၆၀x၃၆၅ ရက်=၂၁၉၀၀သန်း
ဒီသယံဇာတပစ္စည်းတွေကို အစိုးရပိုင်အနေနဲ့ ထုတ်ယူနေတာလား။ ပြည်သူတွေကိုထုတ်ယူခွင့်ပေးထားတာလား။ ကျန်းမာရေး ပညာရေး လမ်းတံတားတည် စတဲ့ Project တွေအတွက်ဝင်ငွေဘယ်ကရလဲ။ ၀င်ငွေထက်ထွက်ငွေများနေတယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။
ဒါကတော့ ဆင်းရဲခြင်းကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေတယ်ထင်ပါတယ်။ စစ်ဖြစ်ရင် စစ်စရိပ် ကုန်မယ် ငွေကုန်ရင်ဆင်းရဲမယ်။ ပြည်သူတွေမြေဇာပင်ဖြစ်မယ်။ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်မယ်။
အုပ်ချုပ်ရေးစံနစ်ကတော့ ညံ့တယ်လို့မထင်ပါဘူး။ စီးပွားရေးအခြေခံခိုင်မာတောင့်တင်းမှုမရှိတဲ့အတွက်အပေါ်ထပ်အဆောက်အအုံကို သက်ရောက်မှုလို့ထင်ပါတယ်။ ပြဿနာတခုရဲ့ရေသောက်မြစ်ကိုမှန်ကန်စွာ ရှာဖွေဖြေရှင်းနိင်မှုမှာအားနည်းချက်တွေရှိတတ်တဲ့အတွက် ခုတ်ရာတခြားရှရာတလွဲ ဖြစ်နေတယ်လို့မြင်ပါတယ်။
ကျနော်လဲ လက်ခံပါတယ် ခုအချက်တွေကိုဗျ။
ခိ ခိ …:D
ကျေူးဇူးနော် ။ ဖတ်ရှု ခံစားပေးလို့ ..။
ကျကျနန ခံစားဖတ်ရှုပြီး.. သေသေချာချာ ကျကျနန ပေးသွားတဲ့c0mment အတွက်.ကျေးဇူးနော် ။
နံပါတ် ( ၁ ) အချက်ကို ..
အတွေးရော အရေးပါ ညက်ညက်ကလေးမို့
ထောင့်မှ ထိုင်ပီး ကုပ်ကုပ်လေး အားပေးသွားပါကြောင်း ။
ဇိမ်ရှိဖို့ထက် နပ်မှန်ဖို့ဦးစားပေးနေရတဲ့ဘ၀တွေကို ပြောင်းလဲစေချင်တယ်ဗျာ။
နှစ်၁၀၀၀ ကျိန်စာ :?
အော်….သူဂျီးရယ်..နှစ် 1000 ကျိန်စာ..တဲ့ လား.
ထောင့်မှ ထိုင်ပီး ကုပ်ကုပ်လေး အားပေးသွား..သူ…ကိုရဲ..ရေ..
ကျေးဇူးပါ..လို့ . တိုးတိုးပြောလိုက်ပါရစေ….
ကျယ်ကျယ်မပြောတာ..က … အား.မရှိလို့ ပါ ။
ဒါပေမယ့် စုတ်ချာနေတဲ့ကွန်နက်ရှင်ကို အံတုရင်းနဲ့ …
မောင်ဂီရဲ့ တရုတ်ဗေလုဝ လို `ဇွဲ´ တော့ ရှိလာတယ်။ :D
တစ်ချက်ကိုတော့ဖြင့် အားပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
တယ် ဟုတ်ပါလား.ဗျ ။
ဘယ် အချက်များပါလ်ိမ့် ။
အတွေးလေးတွေ ဆန်းသစ်စွာဖြင့် အက္ခရာ ခေါင်းစဉ်လေးတွေနဲ့ လိုက်လျော ညီထွေစွာ ရေး ထားတာတွေကို ဒီတပုဒ်တာမက အခြား အပုဒ်များကို ပါ နှစ်သက်မိလို့ အားလုံးအတွက် ပေါင်းပေးလိုက်ပါသည်။